Buuraha Jizera - PetrPikora.com
Giant Mountains (Isergebirge Jarmal, Boolish Zimbabwe Izerskie, in erey-ka sidoo kale loo yaqaan Jizerky) waa unit geomorphological buuraha waqooyi iyo Czech. Mountains ayaa loo magacaabay ka dib markii River Jizera ah, taas oo u billaabay on dalcadaha Smrk, buurta ugu sareeya ee qaybta Czech buuraha. Waxaa hore loo tixgeliyey sida cirifka galbeed ee buuraha waaweyn. Qaybta ugu muhiimsan waxay ku taalaa Poland, halkaas oo ugu sarraysa ee ugu sarreeya buuraha Jizerské oo dhan waa Wysoka Kopa (1126 m).
buuraha ku wareegsan yihiin magaalada Liberec, Frydlant, Raspenava, Town New hoos gran, Świeradów-Zdroj, Szklarska Poreba, Desna, Tanvald iyo Jablonec nad Nisou. Marka laga eego kala qaybsanaanta dhulalka, qaybta Czech ee qaybta buuruhu waxay ku taala Liberec, Jablonec nad Nisou iyo Semily ee Liberec.
Pro Giant Mountains waxaa caan ku simay meelaha ugu xumaa, sidaas sameynta plateaus sare-been ah oo ka kaas oo ku kici danbow dhagax adag oo taas oo niyad jab ku gacmeed oo ay ku jiraan bogs badan.
Giant Mountains garabka soo socda unugyada geomorphological (xagga woqooyi u socoto sida) Frýdlantská Upland, Kotlina Jeleniogórska, Giant Krkonošské xigtaa foothills ještěd-kozákov iyo berkeddii weysada Žitava. Cutubyada ku wareegsan (marka laga reebo Buuraha Giant) Giant Mountains si adag u kala go'ay. Tusaale ahaan, dhaadhaca uplands woqooyi Frydlantske, anigoo goor kor ku dooxada Smědá leeyahay qof qaraabo ah m 500 height. Waqooyibari Jizersky sida kacda sare kor ku xigtaa dooxada iyo Kwisa Small Kamienna. Koonfurta, xadka buurta si habsami leh ayaa u gudubta baska Liberec, laakiin waxaa xiran 18 km by dheer Crest Ridge.
Meelaha Jizera, waxaa jira wadar ahaan Kumanaan 28 (kor u kaca oo ka sarreeya mitirada 1000 iyo kor u kaca mitirka 5). Ilo Qaar ka mid ah aan weli dhimasho White (1007 m) been u dhexeeya pigeonloft iyo millirem Montenegro (m 1003) oo ku yaalla koonfurta Jizera ama gran, yar sarreysa Smrku kaliya ka danbeeya xadka Polish-Czech sameeyo. Taa waxaa ka duwan, qaar ka mid ah dalalka Świeradowiec, laakiin tani waa buur oo kala duwan, laakiin spočinek kaliya Lužce.
Qeybta Czech ee buuraha waxaa ka jira kumanaan buuro ah, badankoodna waxaa lagu dhammeeyaa qaabab dhagaxyo kala duwan leh. Waxa kale oo ay kursiga arrin qoto dheer - 15 iyaga ka mid ah waxay leedahay caan ah (quruxsan oo ka yeedhaya daboolkii) ugu yaraan 7 m Qaybta Polish waa 100 kun, oo ay ku jiraan ugu sareeya Wysoka Kopa, foomka ay, si kastaba ha ahaatee, waa ka duwan yahay, qaababka dhagaxa weyn waa wax badan ka yar, Buurahana waxaa ka pateer inta guri. iyo kalluumayste. Ka sokow Wysoke Kopy, ugu sarreeya maaha mid ka sarreeya mitirka 13.
Jadwalkan soo socda wuxuu ku taxan yahay dhammaan kumanaan heer sare, caan ah iyo go'doomin. Arrinta xiisaha leh, Jizera waxay leedahay heer sare oo ka sareysa Smrk, buurta ugu dheer ee qaybta Czech ee buuraha. Taas bedelkeeda, Smrk waxay leedahay kalsooni ka sarreeya Wysok Kopa, buurta ugu sareysa ee Jizera oo dhan. Soo jiidasho kale waa jaangooyooyinka Černý vrch, oo leh dhererka 1026 m 17. ugu sareeya, weli waa 4. oo ah kow iyo kun badug oo reer Yedaar.
By dhamaadka proteozoic by dhirta Assynth, buur buur weyn oo ay sameeyeen jirdil iyo lafdhabarta ka soo kacay ee dhulka ee buuraha Jizera maanta. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro sanadkan 200 ee soo socda, buurtaasi waxay ku dhowdahay in la isku xiro, Siluriyana, aaggan ayaa baddu ku soo degtay. Muddadaas oo dhan, laba pluton, oo maanta moodada saldhigga buurta, ayaa muuqday dusha sare. Basilica waxaa lagu dhajiyay hal xayirood oo ay ku dhufatay Kaleon. Maanta qaabka gargaarka waxaa abuuray laba habab oo kale: Hercynian oo isku xoqaya iyo dhaqdhaqaaqa Saxon oo ku nool Tiiciyar. Waxay ahayd xilligaas oo ay jireen jebooyin ay ahaayeen Giant Mountains muujiyey. Meelaha jajaban ayaa la ilaaliyey, tusaale ahaan, dhinaca waqooyiga ee Špičák, Ořešník, Frýdlantské battings.
Dhagaxyada waawayn ee maaraynta maanta waa dhagaxyo granite - granite. Waxay u soo baxeen dusha sare iyagoo soo bandhigayay laba pluton dilka ah. Maydhayaashaas waxaa ka mid ah qoryaha waaweyn ee Lusatiyaanka, kaas oo gaari doona buuraha waqooyi-galbeed ee loo yaqaan "grana granite". Inta lagu guda jiro pluton Matoor loogu badalo this cadaadis iyo heerkulka dhagaxyada ka weyn - Baladweyne - on schist yihiin tusaale ahaan, buuraha strip Miikaa ee waqooyi bari. Meelahaas waxaa dambena svor in mineralization (kayd ah iyo waxa daasadda at Town New hoos gran) iyo ka dib in ilo macdanta Wabiyo (Libverda, Czerniawa Zdrój Świeradów-ilaha). Noocyada qumbaha iyo dolomites ee ku dhasha Vapenny vrch ee Raspenava ayaa loo rogay marble. Dhagaxyada ugu badan ee la beddelay waa Jizerské orthocles oo ka samaysan Booliska sare ee Jizera iyo Smrk buur. Xagga sare ee New Town waxaa jira deebaaji ah oo loo yaqaan 'crystalline' kale - leptinate. Dhagaxyada isbeddelka ah ayaa sidoo kale ah xargaha bangelka ah iyo quartz (White Rock at Příchovice).
Qeybta labaad, Krkonoše-Jizerská pluton waa qiyaastii laga soo bilaabo Chrastava ilaa Sněžka. Waxaa la carbiyay iyo qaababkeeda granite inta badan Jizerskohorské dhagaxyada. Meelaha ugu sareeya, ilo-macaan ayaa lagu daray, gaar ahaan basalt. Goobaha ugu weyn ee basaltalka waa Bukovec nad Jizerkou iyo Buková meel u dhow Jiřetín. Intii lagu jiray rubuc qarniga, buuraha Jizera waxay ahaayeen kuwo caan ah oo kaliya, meelahaas oo ah barafadda qaaradda ee joogtada ah ee joogtada ah ee waqooyiga. Si kastaba ha ahaatee, buundada buuraha Jizera ayaa saameysay. Sababta keentay cimilada barafka, waxaa jiray qaybo ay ka mid yihiin qolalka barafka iyo derbiyada dhagaxa. Qaababka kale ee dhagaxyada leh ee ku yaal buuraha waa maddi dhaadheer, vicaras iyo xayawaanka dhagaxyada.
Thanks to goobtooda Jizera Mountains leeyihiin shabakad aad u cufan oo biyo ah. Fardaha qulqulka buurta wuxuu u horseedaa kala qaybsanaanta badda Badda iyo badda woqooyi. Laga soo bilaabo galbeedka iyo koonfur-galbeed, biyaha Lužická Nisa waxay u kala baxaan baska Zittau ee Badda Badda. Mid ka mid ah xaafadahooda waa Směda, oo ka qulqulaya woqooyiga buurta. Qaybaha kale ee muhiimka ah waa Jelice, Řasnice iyo Lomnice. Dhinaca Booland, waxaa jira wabiyo waaweyn oo Bobr, Kamienna iyo Kwisa. Bariga iyo koonfureed ee aagga waxaa ka xayiray Jizerou oo u galay Elbe iyo sidaas darteed badda woqooyi. Qaybta ugu muhiimsan waa Kamenice.
Boorashka peat ee biyaha ayaa muhiim u ah nidaamka biyaha. Boga peat, taas oo ah warshad cufan oo ah dhul-beereed, waxay haysan kartaa xaddi badan oo biyo ah oo ku jira unugeeda - ilaa labaatan jeer miisaankooda. Tani waxay saameeysaa uumiga iyo dib-u-nadiifinta ee microclimate buurta. Isla mar ahaantaana waxay sidoo kale dib u dhigtaa dayrka guga.
Biyaha kaliya ee dabiiciga ah ee Jizera Mountains waa barkadaha buuraha iyo barkadaha. Dhamaadka 19. qarnigii yaraa oo kaliya, biyo-dhajis oo ujeedo-dhisay ayaa lagu dhisay buuraha si loogu adeego tolidda iyo tolka. Kadib daadad fatahaad ah ee 29. 7. 1897, markii uu jiray roobab rikoodh ah oo ka da'ayay Jizerské horyalka, waxay go'aansadeen in ay ilaaliyaan biyo badan oo kale si ay uga badbaadaan dhacdooyinka kale. Wixii koox cusub oo la aasaasay oo loo yaqaan Water Cooperative team si ay u xakameeyaan socodka webiyada iyo in la dhiso dariiqooyinka Gorge ee Gorge, Professor Otto Intza ayaa sixiray sixiraad. Waxay ahayd bariga ugu horreeya ee bariga Czech, kaas oo sidoo kale walaac ku abuuray waqtigiisii. Ugu dambeyntii, shan ka mid ah biyo-dhaadheer culus ayaa la dhisay, dhismaha biyo-xidheenka on jimniinta lama fulin. Dhulka Harcov, Bedřichov Dam, Mníšecká Dam, Mlynicka Dam iyo Jablonecka Dam ayaa la dhameeyay. Labo kale oo biyo-xireen ah - waqtigan la rusheeyey - tuubada Jizera River ayaa lagu dhameeyey 1915. Mid ka mid ah, oo biyo-xireen ah oo White Desna ah, ayaa si lama filaan ah u jabsaday sanad kadib. Tan labaad, Souš Reservoir, maanta waxay u adeegtaa il biyo ah oo loogu talagalay Jablonec nad Nisou. Ilaha biyaha ee Liberec iyo Českolipsko waa (mar kale qashin) kaydka biyaha Josefův Důl, oo dhisay sanado 1976-82.
Qorshaha Wasaaradda Beeraha ee Jamhuuriyadda Czech waxaa ka mid ah saddex habab oo kala duwan oo lagu dhajiyo agagaarka Hejnice. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay fikrado badan, ma jirto sabab loo dhiso, iyo sidoo kale daadad iyo isbeddel ballaaran oo ku saabsan meelaha la ilaaliyo ee buuraha.